आइसल्याण्ड को Geysers: इतिहास र विवरण
उत्तर एटलान्टिक को सानो टापु राष्ट्र, बरफ को भूमि रूपमा उल्लेख, बल्कि कठोर, छैन समुद्र तट जलवायु बावजुद, एउटा वास्तविक पर्यटक तिर्थयात्रा को "Mecca" थियो।
पर्यटकहरु बीच आइसल्याण्ड लोकप्रियता को पहेली
एउटै नाम को राज्य मा फारम संग द्वीप आइसल्याण्ड - सालाना सबै दुनिया भर देखि एक लाख भन्दा बढी पर्यटक स्वागत जो ग्रह, सबैभन्दा अद्वितीय र सुन्दर ठाउँहरू मध्ये एक।
द्वीप उच्च चासो रहस्य के हो? किन अद्वितीय छ? आखिर, आइसल्याण्ड आर्कटिक वृत्त, नीरस र monotonous permafrost मात्र छोटो दूरी छ। साँच्चै, द्वीप मा वनस्पति एकदम विरल कहिले काँही सिर्फ एक ascetic, एक subarctic जलवायु, आंशिक न्यानो खाडी स्ट्रिम mitigates छ। यसलाई त्यहाँ हेर्न हो कि जस्तो थियो?
यसैबीच, यस उत्तरी द्वीप मा अतिथि को संख्या हरेक वर्ष बढ्दै छ पहिले नै देशको लागि बल को गम्भीर परीक्षण बन्ने, त्यहाँ अलिकति कि माथि स्थानीय जनसंख्या बनाउन 300 भन्दा बढी हजार मानिसहरू थिए।
आइसल्याण्ड - geysers, ग्लेसियर र ज्वालामुखियों को देश
वास्तवमा, त्यस आइसल्याण्ड दृश्य छ, र स्मृति रहनेछ एक लामो समय को लागि देखेको - तपाईंले सबै प्राकृतिक शक्ति, अथाह शक्ति र आमा पृथ्वी नै महानताका, सबै चार तत्व मा एक पल्ट मा देखाइएको छ मनन गर्न सक्छन् छ। "बरफ को देश", "ज्वालामुखी टापु", "तातो वसन्त को देश" र, पाठ्यक्रम, "geysers को देश": कुनै आश्चर्य आइसल्याण्ड धेरै नाम छ।
आइसल्याण्ड को Geysers यो सानो राज्य को मुख्य आकर्षण मध्ये एक हो। पहिले नै रिकिविक (आइसल्याण्ड को राजधानी) बाट सय किलोमिटर को यात्री geysers Haukadalur को बेसी सबै महानताका र बडाई प्रस्ताव। आइसल्याण्ड को geysers तस्विरमा हेर्नुहोस् र उपत्यका नै मा कदम - छैन नै कुरा।
प्रस्तुति प्रकृति द्वारा आयोजित
Geysers यस आइसल्यान्डिक उपत्यका, वरिपरि 40 तातो पानीको पोखरी संग, सबै दुनिया भर प्रसिद्ध भए। यो स्थान यसको अविश्वसनीय रंगीन गतिविधिहरु र शानदार प्रदर्शन, जहाँ निर्देशक को भूमिका मानव प्रतिभा भन्दा धेरै प्रकृति दिइएको छ लागि धेरै पर्यटक प्रवाह आकर्षित गर्छ।
सेतो को बादल, जमीन साथ एक जोडी creeping, यो पप सेटिङ, को reminiscent हुँदा चरण क्रल सेतो धुवाँ heralding केही रोचक र त्यहाँ हुनेछ चाँडै रोमाञ्चक छ। र शैली को व्यवस्था अनुसार, सबै शो जस्तै, geysers सम्बन्ध को बेसी जारी छ मा निर्मित। बाफ को पर्दा पछाडि बाट जमीन देखि फुट्नु र शक्तिशाली geysers माथि - प्ले सुरु हुन्छ। थप ठीक, यो जारी छ। दिन र रात, गर्मी र जाडो - सधैं। अनन्त स्पर्धा, यसको मात्रा, महानताका, रंग र सजावट को richness मा निर्मित निर्माण भिन्न छ।
आइसल्याण्ड को राजधानी को नाम को इतिहास
केही स्रोतहरु अनुसार, "धुवाँ बे" हार्बर, उमालेको "मतलब", "धूम्रपान को बे" - कारण आइसल्याण्ड को राजधानी को यो अमरीकी गर्न, रिकिविक यसको नाम पाए। जब बसोबास गर्न द्वीप को किनारमा आफ्नो सेना संग उतरा यो स्थान, पहिलो पटक यो नाम नर्वेजियन अन्वेषक Arnarson (9th शताब्दीमा) भनिन्छ। पछि उहाँले मलाई र आफ्नो retinues संग नर्वेजियन महान जन्म अन्य प्रतिनिधिहरु आमन्त्रित वर्तमान नर्वेजियन Jarl संग लगातार कलह छन्।
आफ्नो प्रसिद्धि र लोकप्रियता Haukadalur उपत्यका एक जो 60 मीटर को एक उचाइ गर्न उठाने स्तम्भ को सक्षम छ ठूलो geysers, एक ठूलो संख्या owes। उत्कृष्ट अमरीकी।
बेसी मा ठूलो भइरहने geysers साथै तपाईं कम धेरै तातो पानीको पोखरी पाउन सक्नुहुन्छ। केही gush, को Boiling र भइरहने puddles केही समान: तिनीहरूले पनि आफ्नो विविधता रुचि हुन गर्न सक्षम छन्। त्यहाँ अत्यधिक को सिंचाई dacha समान स्प्रे पानी स्प्रे जेट बगैंचामा बेड छन् कि यस्तो पनि हो। एक फरक छ। पानी geysers बिल्कुल बरु आपत्तिजनक, यो उम्लिरहेको छ र गंभीर छाला बल्न सक्छ। सल्फर एक प्रतिरोधी विशेषता गन्ध यो पानी पिउने गर्छन् छैन भन्ने देखाउँछ।
प्रत्येक वर्ष भिन्न बेसी को उपस्थिति छ। यो कारण क्षेत्र को उच्च भूकम्पीय गतिविधि बन्नेछ।
आइसल्याण्ड मा ठूलो वा महान् तातोपानी
Geysir, आइसल्याण्ड, को 13 औं शताब्दीमा पत्ता - आइसल्याण्ड को geysers को बेसी को क्षेत्र मा प्रकट भइरहने तातो पानीको मूल को दुनिया मा पुरानो र सबै भन्दा प्रसिद्ध छ। इतिहास आफ्नो शक्ति र शक्ति भूमि काउन्टी, भर टाढा अर्को फुट्ने काम मा "कामेको र मिलान भयो" भनेर महान थिए बताउनुहोस्। आधुनिक Icelanders पुर्खाहरूको उहाँलाई उपासना, र उहाँले Geysir भनिन्छ। यो नाम पछि प्रकृति को सबै समान घटना लागू भएको थियो - geysers।
को 19 औं शताब्दीका शक्तिशाली Geysir यसको गतिविधि भएनन्। धेरै तातो पानीको मूल अवस्थित भएनन् भनेर विश्वास गरे। तर Geysir एक पटक एक प्रमुख भूकम्प सीतनिद्रा बाहिर ल्याए। तातोपानी नव तथापि पूर्व शक्ति र शोभा देखि प्राप्त, धेरै छैन। महान् तातो पानीको मूल केही दिन वा महिना को लागि आफ्नो गतिविधि, "बाँकी" suspends। यो कार्य मा हेर्न धेरै भाग्यमानी मानिन्छ। गतिविधि को अवस्थामा Geysir एक दिन धेरै पटक erupts, र आफ्नो पोस्ट उहाँलाई महान् को शीर्षक छोड्दा जो, 50-60 मीटर पुग्न सक्दैन। आफ्नो "भाइ" - आइसल्याण्ड को geysers, पाठ्यक्रम, यस्तो शक्ति घमण्ड गर्न सक्दैन। दोस्रो ठूलो तातो पानीको मूल उपत्यका Haukadalur तातो पानी र बाफ मात्र 20-30 मीटर को स्तम्भहरू बाहिर फालिएको, छलफल Strokkur।
दोस्रो, पनि आदरणीय। विशेष गरी तपाईं Strokkur eruptions (औसत मा) हरेक पाँच मिनेट उत्पन्न कि विचार गर्दा। र प्रकृति को यो आश्चर्य को उज्ज्वल रंगीन अमरीकी देखेर बिना Geysers को उपत्यका, भ्रमण गर्न, यो बस असम्भव छ। बाट अनुवादित Strokkur आइसल्यान्डिक भाषा अर्थ "churn", "वनस्पति तेल टब।" यो भइरहने तातो पानीको मूल अधिक पुरातन र शक्तिशाली Geysir भन्दा पर्यटकहरु संग धेरै लोकप्रिय भएको छ। Strokkur फुट्ने काम छैन भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। संघ "वा" - यी सधैं बोलीको सहायक भाग लागू हुन्छ। तातोपानी एक समयमा एक, दुई, पनि तीन क्रमिक eruptions बनाउन सक्छ, eruptions को आवृत्ति पनि फरक छ। उहाँले नै हरेक 2-3 मिनेट प्रकट गर्न सक्षम छ, र 5-6 मिनेट मा आफ्नो उपस्थिति संकेत गर्न सक्नुहुन्छ। यी मान जो विशिष्टताको होइन्छ, erratically alternated छन्।
incongruous को संयोजन
यो अवधि आइसल्याण्ड को द्वीप लागू गर्न सकिन्छ। ज्वालामुखियों र geysers, ग्लेसियर strikingly करीब निकटता, पर्यटकहरु को भाइचाराको यसको अचम्मको दृश्य स्लिप छन्। जबकि यस मा आश्चर्य केही छ। संसारभरि Geysers त्यहाँ त्यहाँ ज्वालामुखियों छन् ठाउँमा, एक seismically सक्रिय क्षेत्रमा छ। आइसल्याण्ड को Geysers ज्वालामुखी गतिविधिको बढ्नु प्रक्रिया सुझाव।
को आइसल्यान्डिक geysers को इतिहास देखि
आइसल्याण्ड को Geysers आफ्नै इतिहास छ। अनुमानित उमेर geysers Haukadalur उपत्यका (विभिन्न स्रोतहरूबाट अनुसार) बारे हजार दस वर्ष छ। यो भौगोलिक क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प 1294 साल फिर्ता डेटिङ सम्बन्धित geysers को विशाल उपस्थिति। यो भूकम्प सबै महत्वपूर्ण घटनाहरू सम्बन्धित र परिवर्तन Haukadalurskoy उपत्यका छ:
ठूलो विस्फोट धेरै geysers 1630 मा पृथ्वीको हल्लाउँदै र स्पेस विश्वास नलाग्दो हल्ला भरिएको;
लामो निष्क्रियता Geysir 1896 मा भएनन्, को तातो पानीको मूल सक्रिय भए;
1910 - गतिविधि Geysir नाटकीय वृद्धि र उत्सर्जन हरेक आधा घण्टा उत्पन्न;
1915 - Geysir फेरि यसको आवृत्ति उत्सर्जन, छ घण्टा तिनीहरूलाई बीच समय अन्तराल वृद्धि परिवर्तन;
एक वर्ष पछि (1916) आफ्नो गतिविधि न्यूनतम हुन्छ, र चाँडै पूरै बन्द;
2000 एक दिन 8 पटक सम्म अन्तरालहरुमा Geysir को गतिविधि revives।
सबै परिवर्तनहरू अनिश्चितकालीन हुन सक्छ सूची - तिनीहरूले नियमित हुन्छन्, र पनि सधैं समीक्षा देखिने छैन। आइसल्याण्ड को द्वीप - यो स्थान हो। रहस्यमय र अप्रत्याशित। मौका, आफै प्रस्तुत यदि यो चमत्कारी आश्चर्य हेर्न र यो पक्कै पनि एक यात्रा लायक छ।
मार्शल Govorov लियोनिद Aleksandrovich: जीवनी, पुरस्कार
Inglorious फिनिस युद्ध
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध 1941-1945: एक सारांश। फासिज्म विरुद्ध संघर्ष सोभियत मान्छे को कमाल
Zhan पीओएल Marat: छोटो जीवनी
Malayan बाघ: विवरण, फोटो
वाइफाइ प्रत्यक्ष - यो के हो? कसरी स्थापित गर्ने र वाइफाइ प्रत्यक्ष कसरी प्रयोग गर्ने?
मर्मत र आधुनिकीकरण। ल्यापटप ASUS कसरी खोल्ने गर्न
फिल्म "असाधारण गतिविधि": सबै भागहरु को सूची
"वोल्वो" S90 को समीक्षा: मोडेल, डिजाइन, विनिर्देशों,
"बँदेल" जेनरेटर: मोडेल को समीक्षा, विशेषताहरु। ग्राहक समीक्षा
डिजाइन को लागि आवश्यक आगत डाटा
को रियर delts मा अभ्यास। को रियर डेल्टा मा कर्षण
पैसा स्थानान्तरण "नेता": शुल्क र मास्को मा अंक प्राप्त ठेगाना
Dzhek Dempsi, को घूंसेबाज: जीवनी, खेल क्यारियर